Warbixin:Jawaari iyo Shariif Xasan Ninba dhinac u guuleysey | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Warbixin:Jawaari iyo Shariif Xasan Ninba dhinac u guuleysey
Warbixin:Jawaari iyo Shariif Xasan Ninba dhinac u guuleysey
Guddoomiyihii Hore ee Barlamaanka Dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa mar kale dib loo doortay kadib markii uu wareegii koowaad helay 141 cod, halka Xildhibaan Cabdirashiid Xiddig uu kaalinta labaad ku helay 97 cod.
Guusha Jawaari oo ah mid lawada filayay ayaa fashilisay qorshe uu madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan, uu ku doonayay in beelaha Digil iyo Mirifle, ay sanadkan ka harto tartanka guddoonka Barlamaanka
Isagoo Shariifku, doonayey in taariikh sameeyo oo nin Digil iyo Mirifle ah markii ugu horeysey uu noqdo madaxweyne ama Raiisul wasaare, Waa uu ku hun-goobey shariif Xasan qorshahaas.
Hase yeeshee,waxaa Shariif-ku, ku guuleystey in uu helo 97 cod, taas oo ka dhigeysa Shariif Xasan, in uu noqdo madaxweyne sameeye oo haatan lahadal hayo in uu tartanka madaxweynenimo ku guuleysanayo dhinicii codadka shariifku aadaan, waxayna taasi dhici kartaa haddii codadkaas aanna kala qaybsamin oo ay isku duubnaadaan.
Codadka 141-da ah ee Jawaari u coddeeyey waxaa shirko ku ahaa tartamayaal badan oo jagada madaxweynenimo u taagan, wayna kala qaybsamayaan.
Su’aasha taagan ayaa waxay ay tahay waa kuma murashaxa Coddadka Shariif Xasan ay wadajir ugu coddeyn doonnaan haddii ayna kala jabin .
Waqtiga ayaa ka jawaabaya
Hase yeeshee, waxaa afka lagu hayaa ganacsato kala danno ah hadda isku dan ah oo isbaddal doon ah.
Previous articleMaxaad ka taqaanaa taariikhda Gudoomiye Jawaari
Next articleDeg Deg: Cabduwali ibraahim Muudey oo loo doortay gudoomiye ku xigeenka Baarlamaanka